सर्वश्रेष्ठ J-147 (1146963-51-0) पाउडर निर्माता - Cofttek
Cofttek चीन मा सबै भन्दा राम्रो J-147 पाउडर निर्माता हो। हाम्रो कारखाना एक पूरा उत्पादन व्यवस्थापन प्रणाली (ISO9001 र ISO14001), 120kg को एक मासिक उत्पादन क्षमता संग छ।
J-147 (११1146963 51 0-XNUMX-XNUMX१-०) Specifications
आणविक फार्मूला: C18H17F3N2O2
आणविक वजन: 350.341 जी / mol
पिघल प्वाइन्ट: 177-178 ° C
रासायनिक नाम: 2,2,2-Trifluoroacetic acid 1-(2,4-Dimethylphenyl)-2-[(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide
पर्यायवाची: N- (२,2,4-डिमेथिल्फेनिल) -२,२,२-trifluoro-N '- [(E) - ((-methoxyphenyl) methylene] acetohydrazide
InChI कुञ्जी: HYMZAYGFKNNHDN-SSDVNMTOSA-N
आधा जीवन: प्लाज्मामा १. 1.5 घण्टा र दिमागमा २. 2.5 घण्टा
घुलनशीलता: DMSO मा १०० MM र इथेनोमा १०० MM सम्म घुलनशील
आवेदन: J-147 पाउडर एक नयाँ प्रयोगात्मक औषधि हो जुन अल्जाइमर रोगको सम्भावित उपचारको रूपमा विकसित भईरहेको छ।
रूप: अफ-सेतो पाउडरको सेतो
J-147 (११1146963 51 0-XNUMX-XNUMX१-०) NMR स्पेक्ट्रम
J-147 (११1146963 51 0-XNUMX-XNUMX-XNUMX१-०) के हो?
J-147 पाउडर एक नयाँ प्रयोगात्मक औषधि हो जुन अल्जाइमर रोगको सम्भावित उपचारको रूपमा विकसित भईरहेको छ। अहिले सम्म, चूहोंमा गरिएको परीक्षणहरूले धेरै प्रतिज्ञा देखायो। J147 ले डिमेन्शिया र अल्जाइमरको प्रभावलाई उल्टाउँदै माउस मोडेलहरूमा प्रभाव रिपोर्ट गरेको छ। J147 विभिन्न Nootropics र Alzheimer को लागी लागूऔषधको तुलनामा फरक दृष्टिकोण लिन्छ। J147 मस्तिष्कमा प्लेक भण्डारहरू हटाउन कोशिस गर्दछ। अन्वेषकहरूले यो पनि याद गरे कि जे १147 मा धेरै जैविक बुढेसकालका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्भाव्यता छ, मेमोरी नोक्सान मात्र होईन। औषधीले माइक्रोवेल्सबाट रगत चुहावट रोक्न मद्दत गर्न सक्छ, जहाँसम्म अहिलेसम्म गरिएको चूहों परीक्षणहरू देखाईन्छ। यो औषधि पहिलो पटक २०११ मा विकसित भएको थियो। त्यस समयदेखि, चूहोंमा परीक्षणहरू सञ्चालन गरिएको थियो तर हामीले कुनै व्यापक मानव-आधारित क्लिनिकल परीक्षण देखेका छैनौं। यद्यपि, गत वर्ष प्रकाशित केही अनुसन्धानहरूले J2011 मानव मस्तिष्क भित्र कसरी काम गर्दछन् भन्ने बारेको एक राम्रो चित्रलाई चित्रित गर्छ। कागजका अनुसार, औषधि प्रोटीन माइटोकन्ड्रियामा बाँध्छ। मिटोकोन्ड्रिया कोशिका प्राय: उर्जा उत्पादनको लागि जिम्मेवार हुन्छन्। तिनीहरूमा J147 को कार्यले सेल पुनर्जीवन बढाउँछ। यो पुनर्जीवन मेमोरी नोक्सानलाई उल्टाउन र समग्र संज्ञानात्मक स्वास्थ्य वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण छ।
J-147 (1146963-51-0) लाभहरू
डिजेनेरेटिव ब्रेन डिसआर्डर्सलाई उल्ट्याउन सक्छ
जे १147 ले न्यूजोडिजरेटिभ मस्तिष्क विकारहरू जस्तै अल्जाइमर्स र अन्य जस्ताका प्रभावहरूलाई उल्टाउन धेरै प्रतिज्ञा देखाएको छ। माउस मोडेलहरूमा हालसम्म गरिएको परीक्षणमा, औषधिले यी शर्तहरूसँग व्यवहार गर्दा धेरै सकारात्मक प्रभाव देखाएको छ।
J147 मस्तिष्क पुनर्जीवित कोशिकालाई मद्दत गरेर काम गर्दछ, तिनीहरूलाई जवान र पुराना कोशाहरू भन्दा अधिक कार्यशील बनाउँदछ। यद्यपि यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि J147 का प्रभावहरूमा कुनै मानवीय परीक्षणहरू गरिएको छैन। आशा छ, यो चाँडै नै हुनेछ तर औषधि अझै पनि चयन गरिएको अनलाइन विक्रेताहरूमा पाउडरको रूपमा बिक्रीको लागि उपलब्ध छ।
Mitochondria कार्य र दीर्घायु सुधार गर्दछ
J147 mitochondria, कोषहरू जो हाम्रो शरीरमा उर्जा उत्पादनको लागि जिम्मेदार छन् बाध्य गरेर काम गर्दछ। जे १147 को कार्यले मिटोकोन्ड्रिया कोशिकामा अक्सिडेटिभ तनाव रोक्न मद्दत गर्दछ, जसले सेलको राम्रो कार्य गर्दछ र दीर्घायु हुन्छ।
J147 ले विषाक्त मेटाबोलिटहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ जसले सेलको एक्जिटोक्सिसिटी निम्त्याउँदछ, प्रक्रिया जुन कोषहरू मार्फत अत्यधिक उत्साहित भएर मर्दछ। यसले तपाईंको सेलहरू लामो समयको लागि नयाँ र स्वस्थ रहन अनुमति दिन्छ। वास्तवमा, जनावरहरूका विषयहरूमा गरिएका केही ट्रेल्सले देखाए कि फलफ्लाईमा जे १147 को प्रशासनले उनीहरूको आयु 9.5। To देखि १२.%% सम्म लम्बायो।
J147 ले मेमोरी बृद्धि गर्ने माउस मोडेलको बीचमा धेरै आश्वासन पनि देखायो। औषधिले अनुसन्धान अध्ययनको क्रममा पुरानो परीक्षण विषयहरूमा गम्भीर संज्ञानात्मक घाटा उल्टाउन पनि मद्दत गर्‍यो।
अन्वेषकहरू विश्वास गर्छन् कि यी प्रभावहरू मानव विषयहरूमा दोहोर्याउन सकिन्छ। त्यहाँ केहि प्रमाणहरू छन् जुन J147 स्थानिक स्मृतिको लागि सम्भावित उपचारको रूपमा अन्वेषण गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन्छ।
न्यूरन्सलाई बचाउछ र मस्तिष्क बढ्न मद्दत गर्दछ
J147 को न्यूरोप्रोटेक्टिव गुणहरू पनि छन् जसले कोषहरू भित्र अक्सिडेटिभ कार्य रोक्दछ। यसले सम्भावित क्षतिबाट न्यूरन्सलाई बचाउन मद्दत गर्दछ। J147 दिमागको विकासको लागि ट्रिगर पनि हुन सक्छ। J147 ले दिमागमा सिन्याप्टिक प्लास्टिसिटी सुधार गर्न सक्दछ, विकासको लागि अग्रणी।
J-147 (११1146963 51 0-XNUMX-XNUMX१-०) उपयोगहरु?
अनुभूतिलाई बढावा दिन्छ
J-147 पूरक स्थानिक र दीर्घकालीन स्मृति बृद्धि गर्दछ। औषधिले बुढेसकालका बीचमा संज्ञानात्मक त्रुटिहरू उल्टाउँदछ जुन संज्ञानात्मक कमजोरीसँग संघर्ष गर्दैछ। J-147 बिक्रीको लागि एक ओभर-को-काउन्टर खुराकको रूपमा उपलब्ध छ र युवा पुस्ताले शिक्षण क्षमता बढाउनको लागि लिइरहेको छ। J-147 एंटी-एजिंग ड्रग्स लिँदा मेमोरी, दृष्टि, र मानसिक स्पष्टता पनि बढाउँदछ।
अल्जाइमर रोगको व्यवस्थापन
J-147 Alzheimer का बिरामीहरुलाई अवस्थाको प्रगति धीमा गरेर फाइदा पुर्‍याउँछ। उदाहरण को लागी, पूरक लिनुले घुलनशील बीटा-एमाइलोइड (Aβ) का स्तर तल ट्रिम गर्दछ, जसले संज्ञानात्मक डिसफंक्शनको लागि अग्रसर गर्दछ। यसका साथै, J-147 curcumin न्युरोनल ट्राभिनको ग्यारेन्टी गर्न न्यूरोट्रोफिन सिग्नलिंग मॉड्युलेटेड गर्दछ, त्यसैले मेमोरी गठन र अनुभूति।
एडीका बिरामीहरूमा कम न्यूरोट्रफिक कारकहरू हुन्छन्। जहाँसम्म, J-147 Alzheimer को पूरक लिने दुबै NGF र BDNF लाई बढावा दिन्छ। यी न्यूरोट्रान्समिटरहरूले मेमोरी गठन, शिक्षा, र संज्ञानात्मक प्रकार्यहरू मद्दत गर्छन्।
J-147 (११1146963 51 0-XNUMX-XNUMX१-०) खुराक
बिभिन्न अध्ययनहरूले चूहोंमा बिभिन्न खुराक प्रयोग गरेको छ, तर एक उत्तम समीक्षा गरिएको अध्ययनले चूहोंलाई प्रति दिन १० मिलिग्राम / किलोग्राम शरीरको वजन दिए। अर्को अध्ययनले १, or वा mg मिलीग्राम / किलोग्राम खुराक प्रयोग गर्‍यो, र डोज-आश्रित प्रभावहरू फेला पारे, उच्च खुराकले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ।
जे होस्, यो एक मानवीय खुराक मा अनुवाद गर्न शरीर सतह क्षेत्र को लागी समायोजन आवश्यक छ। सबैभन्दा सामान्य रूपले प्रयोग गरिएको रूपान्तरण सूत्रका अनुसार, मानव-बराबर खुराक माउस खुराक बराबर हुनुपर्दछ १२..12.3 – वा। .१ मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीरको वजन प्रति किलोग्राम।
त्यो .36 मिलीग्राम J147 को प्रति दिन शरीर वजनको पाउन्ड। यो एक सय पाउन्ड व्यक्तिको लागि दिनको 36 54 मिलिग्राम, १ 150० पाउन्ड व्यक्तिको लागि mg 72 मिलिग्राम, वा २०० पाउन्डको व्यक्तिको लागि mg२ मिलिग्राम हुनेछ।
यद्यपि, अन्य अध्ययनहरूले कम डोजबाट पनि सकारात्मक परिणामहरू फेला पारेका छन र J147 दिमागलाई लक्षित गर्दछ, यो पूर्णतया स्पष्ट छैन कि खुराक शरीरको आकारको आधारमा पूर्णरूपमा मापन हुन्छ।
त्यस्तै, यी संख्याहरू माथिल्लो सीमाको रूपमा हेर्नुपर्दछ, र प्रत्येक दिन १० देखि २० मिलीग्राम केही प्रभाव पार्न पर्याप्त हुनुपर्छ भनेर विश्वास गर्न प्रत्येक कारण छ।
जे-147 पाउडर बिक्रिमा(जहाँ थोकमा J-147 पाउडर किन्नुहोस्)
हामी धेरै वर्षको लागि पेशेवर J-147 पाउडर आपूर्तिकर्ता हो, हामी प्रतिस्पर्धी मूल्यको साथ उत्पादनहरू आपूर्ति गर्दछौं, र हाम्रो उत्पादन उच्चतम गुणवत्ताको छ र विश्वव्यापी उपभोगका लागि सुरक्षित छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न कडा, स्वतन्त्र परीक्षणको क्रममा छ।
 "अल्जाइमर रोगलाई लक्षित गर्ने प्रायोगिक औषधिले एंटी-एजिंग प्रभावहरू देखाउँदछ" (प्रेस विज्ञप्ति)। सालक संस्थान १२ नोभेम्बर २०१.। नोभेम्बर १,, २०१ 12 पुनः प्राप्त गरियो।
 ब्रायन एल वांग (१ 13 नोभेम्बर २०१ 2015) "अल्जाइमर रोगलाई लक्षित गर्ने प्रायोगिक औषधिले पशु परीक्षणहरूमा एन्टी-एजिंग प्रभावहरू देखाउँदछ"। अर्को बिगफ्यूचर.कॉम। १ November नोभेम्बर २०१ 16 पुन: प्राप्त गरियो।